#IBC2018 Usasara Muchiratidziro! - NAB Kuratidzira Nhau ne Broadcast Beat. Mutasviki wezveNhepfenyuro weNAB Ratidza, Mugadziri weNAB Ratidza LIVE
musha » Featured » #IBC2018 Usasara Muchiratidziro!
#IBC2018 Usasara Muchiratidziro!
The IBC Ratidza 2018 rine zvinhu zvinoshamisa zvekuratidzira uye musangano sarudzo izvo zvichapa ruzivo rwakasimba kune vose vanopinda. Yakachengetwa gore negore munaSeptember pa RAI Amsterdam, makore aya #IBC2018 Ichava ne purogiramu yemusangano kubvira September 13th-17th uye mharidzo inotanga munaSeptember 14th-18th. Mikana yekubatanidza ichave yakanakisa kudarika bhodhi kana iwe uri pamusangano wepagungano kana kuenda kune imwe yemitambo.
Kune nzira dzakawanda dzakasiyana dzekunyora kumusangano kubva kuAtendee Registration, Alumni Registration (kwawakambopinda kuBC mumakore mashanu akapfuura semusangano wekugovera kana mushanyi wekuratidzira), kana Press Registration (kwaunoda kushanda kuti ubvumirwe) uye Zvechokwadi, Exhibitor Registration (IBC2018 Exhibitors vanofanirwa ne30% discount pamisangano yose inopera) Tapota taura Simiti yako Mutevedzeri uyo achakwanisa kuronga kupfuura kwako neE-Zone.Kana iwe usingazivi kuti ndiani murovedzeri wako kana iwe une mibvunzo chero ipi zvayo fota taura nayo registration@ibc.org). Yakapiwa iyo hyperlink yekusarudza kwako: ibc.itnint.com/IBC18/Online/CreateAccount.aspx?wf=attendee&stream=attendee&sourceCode=IBC061&cart=
Nezvose zvako travel needs kusvika (uye nezvose) guta rakanaka reAmsterdam, IBC yakapa zvibatanidza zvinoshamisa kuti iwe ugone kuronga rwendo rwako. Kune zvakapoteredza kuenda kune tsvaga nzira iri nyore uye ine mari yakawanda-yekusvika #IBC2018 uchishandisa zvikwereti zvakananga kubva kuBBC's airline airline pamwe chete uye dzidza nzira dzakanakisisa dzekufamba-famba paunogara uchienda pano: show.ibc.org/visit/travel
Nezvose zvako dzimba dzinoda IBC inoshanda neRII Hotel Services kuti ipe mitengo yakaderedzwa uye inoita kuti uwane kukwanisa kutora nzvimbo yeBAC2018 yekugadzirisa mari yako uye zvido zvako. enda pano: show.ibc.org/visit/accommodation
nokuti RAI ruzivo rwekugara kune imwe yekutungamirira kwenyika dzakawanda uye mahofisi emusangano muEurope iri kumaodzanyemba kweAmsterdam kuenda pano: show.ibc.org/visit/venue
Nezveguta rakanaka reAmsterdam iyo mhirizhonga yeEurope inoputika ine zviyero zvisingaenzaniswi zvehupenyu, tsika uye mabasa. Nekufema-kutora makungwa uye magadzirirwo akaisvonaka, guta rino haritombomira kushamisa. Kuti uwane mamwe mashoko, tapota shanyirai Iamsterdam Website.
Ita chokwadi chekunyora kwegungano iri rinoshamisa uye musangano. Hazvina kunonoka! Magazini Beat Beat ichaparidzira zvakawanda zvakadzama zvezviitiko uye zviitiko, uyewo, zvigadzirwa zvemiti!
Kubvira ku1967, IBC yakakura ichiva chiitiko chakakosha chegore negore kune vadzidzisi vanobatana mukusika, kutungamira uye kutakura zvemagetsi ehurumende, munyika yose. Pakutanga iyo International Broadcasting Convention, IBC yakashanduka kubva mumasangano ayo ehupfumi uye nhasi inopindirana nehuwandu hwehupenyu hwekusikwa kwemashizha nekubudiswa, kubva pane zvinyorwa zvepaIndaneti kusvika kuma cinema, zvichibva mumashandi ekugadzira workflows kusvika pakugadzirisa nekugadzirisa kubata nekuratidzwa.
IBC inoramba iri chiitiko chikuru chekambani, uye inoenderera mberi ichibva nesimba kubva kusimba. Iko zvino inokwevera vakawanda kupfuura ve55,000, vanobva kune dzimwe nyika dze170, imwe neimwe yeSeptember muAmsterdam. Musangano wekwenyanzvi hwekwenyanzvi hwekuongorora huripo huri nzvimbo inotanga kunyanya kufunga kwakakosha kutsva. Chikamu chinokosha cheBIBC Conference ndeyeMapepanhau eZvikoro anogara pedyo nepurogiramu yakazara yepanethi, hurukuro uye nheyo dzinokosha, izvo hazvina kukwezva kwete chete kuparidzira vatungamiri asi zviedza zvakasiyana seProfesa Brian Cox uye.i.am.
Iyi musangano inofananidzwa nehuwandu hwekuratidzira hunounza pamwe pedo nevashambadzi ve 1,600, mumwe nomumwe anoratidza huri hwehutano hwekorovaniki. IBC haina kufananidzwa senzvimbo yekusangana nayo uye kugovana ruzivo, uye mikana yayo yekubatanidza uye zviitiko zvinowanikwa zvakawedzerwa - kubva pamitambo kusvika ku-screen screening - chaizvoizvo zvinobatsira kuti zvakakodzera kupinda. Kuzadzisa zvido zvemashamba matsva aya uye akakura zvikuru IBC inoramba ichiumba nzira itsva dzekuita nevateereri varo, kusanganisira kuiswa kweRising Stars nyanzvi inotarisira kubatsira chizvarwa chitsva chezvakagadzirwa uye vashandi vezvigadzirwa zvemagetsi vanoona tsoka dzavo mumakambani, uye mutevedzeri chete wekukoka-Chete Hurukuro yevatungamiri, chiitiko chevatungamiri ve150 yemagetsi ehupfumi uye indasitiri yekushambadzira kuumba sarudzo inotevera. IBC yakagadzirawo mutsva wezviitiko zvekuitika - IBC Content Anywhere - iyo inotora IBC's excellence mune dzimwe nzira.
Zvose zvezviitiko uye ruzivo rweBIB, runotungamirirwa nemabhizimusi emudhizimusi, rinoratidzwa mumusangano uyu wepasi rose, unotarisa kune ramangwana rakabatana. IBC Content Kwese kwese inoratidza kuchinja kwenyika yenyika yakabatana nemagetsi. Kufanana neBC inopa hurukuro yemakwikwi nekutsvaga kwebhizimisi, zvekugadzira uye yekuwana mikana yekugadzira, asi Bhuku Rinobudiswa Pose Pano rinoratidza zvakasiyana-siyana zvekubudiswa kwemasvikiro munyika ye IP ichipa iyo yakasiyana uye yakanyatsotaridzika kutarisa uye kunzwa.
Magazini Beat Beat Broadcast Engineer Broadcast Engineering Broadcasting Convention Video Engineer	2018-08-28
Previous: Dejero Enhances Intelligent Encoding uye Network Kugadzira Software paBC2018
Zvadaro: Yenyika Yokutanga Inyoresa Inyore Studio Studio: Infineon's digital MEMS teknolojia inobatsira maikorofoni eZylia ZM-1
Hey Buddy !, Ndakawana ruzivo urwu kwauri: "#IBC2018 Usasara Muwonesi!". Heino nheyo yehutaniti: https://www.broadcastbeat.com/ibc2018-dont-miss-the-show/. Ndatenda.